साफ च्याम्पियनसिप : इतिहास रच्न आतुर | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← भन्सार छलेर नेपाल ल्याउँदै गरेको बाह्र करोड बढीकाे सामाग्री बरामद
निर्मला हत्याकाण्डको अनुसन्धान अब कता ? →
‘अब नयाँ इतिहास रचिने छ, हामी फाइनल पुग्नेछौं,’ प्रशिक्षक महर्जनले खुबै आत्मविश्वाससँग भनेका छन् । यसपल्ट अन्तिम चारमा नेपालको प्रतिद्वन्द्वी छ माल्दिभ्स । माल्दिभ्स त्यही टिम हो, जसका विरुद्ध साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले अहिलेसम्म जित निकाल्न सकेको छैन । यस्तोमा कसरी सम्भव हुन्छ त माल्दिभ्सविरुद्ध जित ? यसका आधार के हुन् त ? इतिहासकै प्रसङ्गमा सबैभन्दा पहिला पुराना दिनका कथा कोटयाउनु ठीक हुन्छ ।
उनको भनाइ थियो, ‘माल्दिभ्सको मिडिया र केही फुटबल पदाधिकारी किन हाम्रो टिम सेमिफाइनलमा हारोस् भन्ने चाहन्छ, म यो तथ्य बुझ्दिनँ । सबैले सोधिरहेका छन्, टिममा किन अस्फाक छैनन् भनेर ? मेरो काम टिममा नभएका खेलाडीलाई लिएर चिन्ता गर्ने होइन । अहिले टिममा जति खेलाडी छन्, म तिनी’bout मात्र बोल्न सक्छु । यो टिम नयाँँ छ र यही टिम भविष्यमा गएर माल्दिभ्स फुटबलको आधार हुनेछ ।’ उनी एउटा के तथ्यमा सहमत छन् भने टिमलाई सधैं भाग्यले साथ दिँदैन, नेपालविरुद्ध टिमलाई पक्कै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ ।